I-Saint Lucia isiqithi sokuqala seCaribbean ukumilisela izihluzi zeNyaniso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula iindaba zeSanta Lucia » I-Saint Lucia isiqithi sokuqala seCaribbean ukumilisela izihluzi zeNyaniso
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iindaba zeSanta Lucia • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
The IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia (i-SLTA) Iyaqhubeka ukukhuthaza ukuzulazula ngamava amatsha edijithali asebenzisanayo kwi-Instagram, esazisa ngesiqhelo izinto eziNgezelelweyo eziNgezelelweyo (AR) Iifilitha ezinomxholo wokutyikitya ukujonga kukaSanta Lucian kunye namava.
ISanta Lucia ligunya lokuqala lezoKhenketho kwiCaribbean ukumilisela iiFilter zesiko ze-AR. I-SLTA ihambisa abasebenzisi ngamava aphefumlelweyo akhuthazwe yinkcubeko yaseSanta Lucian, ilifa lemveli kunye neziqithi ezithandwayo zesiqithi. Okwenyani okwandisiweyo (AR) yindlela emnandi nenentsebenziswano yokukhuthaza ukuhamba ngokwenyani ebonakalayo ngendlela edlalayo.
Iifilitha ezintsha ze-AR zinokufikeleleka kwi-akhawunti ye @travelsaintlucia Instagram ngokukhetha kuqala ithebhu yeziphumo kunye nophawu loncumo, emva koko ucofe u "Zama". Abasebenzisi banokukhetha kwiifilitha ezintlanu zesiko ezibonisa amava eSanta Lucian. Iifilitha zibandakanya i-iconic Sulphur Springs yodaka lwesigqubuthelo sobuso, umnqwazi we-madras yenkcubeko, i-Carnival ephefumlelweyo yentloko, i-snorkel engaphantsi kwamanzi, kunye nesithsaba seentyatyambo esinombala we-Saint Lucia.
Iifilitha ziyafikeleleka kusetyenziswa ikhamera yangaphambili okanye ngasemva. Abasebenzisi banokukhetha amacebo okucoca ukufota, ividiyo okanye i-boomerang- kunye nokongeza izitikha, imizobo kunye nesicatshulwa ngaphambi kokuba babelane ngokutya kwabo kwe-Instagram, ibali okanye umyalezo othe ngqo.
Ukukhuthaza uchulumanco malunga ne-Saint Lucia kunye neefilitha ezintsha, i-SLTA ibonelela ngamathuba okuphumelela ngethamsanqa lokuphumelela ubusuku obu-5 bokuhlala okubandakanya iiBay Gardens Resorts (@BayGardensResorts). Ukhuphiswano luvulelekile e-USA, Canada, UK, kunye neCaribbean abahlali besizwe ukusukela ngoku ukuya nge-23 kaJanuwari, ngo-2021. Ophumeleleyo uya kukhethwa ngokungacwangciswanga kwaye abhengezwe ngoJanuwari 24, 2021.
INDLELA YOKUNGENA KWEYINGCWELE LUCIA AR KONKE: Inyathelo 1: Landela @TravelSaintLucia & @BayGardensResorts kwi-Instagram. Inyathelo 2: Thumela usebenzisa nayiphi na ezintlanu yeefilitha ze-AR kwi-Instagram feed okanye ibali kunye netag @TravelSaintLucia.
I-Saint Lucia ivulelekile kubakhenkethi kwaye inayo Covid-19 Iiprotokholi ezikhoyo.
Inyikima eCarlifonia Nevada: 5.9
Rekhoda ibango ngeeNqwelo moya ezizimeleyo ukuQhubeka nokuThumela ...
I-Emirates kunye neTripport zifikelela kwisivumelwano ...
Ibali le-12 elingaphaya kwesakhiwo seCondo kwiCollins Ave kwi ...
Isikhululo senqwelomoya saseSan Diego sazibophelela kwipesenti ezili-100 ...